မီးမီးလေးတွေအတွက် လွယ်ကူတဲ့ ဆံပင်စတိုင် (၅)မျိုး - Chit MayMay
Home Child Fashion မီးမီးလေးတွေအတွက် လွယ်ကူတဲ့ ဆံပင်စတိုင် (၅)မျိုး
မီးမီးလေးတွေအတွက် လွယ်ကူတဲ့ ဆံပင်စတိုင် (၅)မျိုး
သမီးမိန်းကလေးမွေးထားတဲ့ မေမေတိုင်းမှာ အိမ်မက်တစ်ခုစီ ရှိကြမှာပါနော်။ သမီးလေး အရွယ်ရောက်လာရင် ဆံပင်ကိုဘယ်လိုပုံစံလေးလုပ်ပေးရမယ်။ ဘယ်လိုအဝတ်အစားလေးတွေ ဆင်ပေးရမယ်ဆိုတာ မေမေတိုင်းရဲ့ အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မေမေတို့ရဲ့ သမီးလေးကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဆံပင်ပုံစံလေးတွေ ဖန်တီးပေးဖို့ လှပလွယ်ကူတဲ့ ဆံပင်ပုံစံလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
၁။ Low Updo
၃။ flower braid
၄။ DOUBLE BRAID
၅။ MESSY PIGTAIL BUNS
မီးမီးလေးတှအေတှကျ လှယျကူတဲ့ ဆံပငျစတိုငျ (၅)မြိုး
သမီးမိနျးကလေးမှေးထားတဲ့ မမေတေိုငျးမှာ အိမျမကျတဈခုစီ ရှိကွမှာပါနျော။ သမီးလေး အရှယျရောကျလာရငျ ဆံပငျကိုဘယျလိုပုံစံလေးလုပျပေးရမယျ။ ဘယျလိုအဝတျအစားလေးတှေ ဆငျပေးရမယျဆိုတာ မမေတေိုငျးရဲ့ အိမျမကျတဈခုဖွဈမယျ ထငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ မမေတေို့ရဲ့ သမီးလေးကို ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ဆံပငျပုံစံလေးတှေ ဖနျတီးပေးဖို့ လှပလှယျကူတဲ့ ဆံပငျပုံစံလေးတှကေို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။
Previous articleမေမေတို့ရဲ့ ကလေးကို မဖြစ်မနေ သင်ပေးသင့်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်း (၁၀) မျိုး
Next articleမေမေ့ကလေး စာလုံးပေါင်းတွေ အရမ်းမှားနေရင် ဘယ်လိုကူညီပေးမလဲ?
အသကျအရှယျမရှေးသမီးငယျလေးတှကေို ပွငျဆငျပေးနိုငျမယျ့ inspo – worthy ဆံပငျစတိုငျလျမြား
ကလေးငယျတှအေတှကျ ဘယျလိုအဝတျအစားမြိုးတှကေို ရှေးခယျြဝယျယူသငျ့လဲ ???